Yakunin Anatoliy Ivanovich kuyinto ubuntu sasivumela owaziwayo komthetho, njengoba ephethwe YaseMoscow State University Wezangaphakathi. Ngisho iphoyisa abavamile, ukufeza imisebenzi yabo ngokwethembeka, kuletha izinzuzo ngendlela ebalulekile emphakathini kanye ezweni. Singathini ngendoda usesikhundleni esiphakeme kangaka? Ake sihlaziye izinga esesithuthuke ngalo uhambo wokuphila, okuyinto owayeyinhloko GU MVD eMoscow Anatoly Yakunin.
Anatoly Yakunin wazalwa ngo-1964 edolobhaneni ku orel esifundeni. Uyise, u-Ivan Yakunin - isosha ezazibuya empini, walahlekelwa emehlweni akhe, Nokho, okuyinto, awamenzanga esikhathini esizayo ukwakha umkhaya omkhulu lapho kwakukhona abantwana abayisithupha.
Ngemva kokuphothula umatikuletsheni, Anatoly Yakunin ngokuthi zibe phakathi kwababusi Armed Forces zaseSoviet Union ngaphandle kokuphazanyiswa. Izikhungo, wabekwa e amabutho umngcele. Kwakuphakathi nalesi sikhathi, wagumbuqela yonke imibono yakhe mayelana nezwe kanye isiphelo sayo. Ngaphambi ayehlele unikele ukuphila kwakhe ekusebenzeni emzaneni, kodwa manje Anatoly Yakunin waqaphela ukuthi ubizo bakhe beqiniso - insizakalo Motherland.
Izinyathelo zokuqala kule Wezangaphakathi
Nokho, ukuhlala phakathi kwababusi Armed Forces, wayengasaboni emva ukuya empini ngenxa izinkinga nabazali ababedinga ukusekelwa ngenxa yendodana yakhe. Nokho, lokhu akuzange kuwumise guy ngo-1985 ukuze uthole umsebenzi Wezangaphakathi, esikhundleni sokuba ngumhloli wesifunda owayephezu amabili nje Imikhandlu emzaneni. Izikhungo amaphoyisa bathandile Anatoly Yakunin, waqaphela ukuthi le Kwakungu ukubizwa kwakhe, futhi banikezwe ngokuphelele umsebenzi, okuyinto kwaba ezithakazelisayo kuye. Inkomba yokuzinikela kwayo angabhekwa ukuthi lowo okonile lokuqala uboshiwe ngemuva kwezinyanga ezintathu nje ngemva kokuthatha isikhundla.
Ngemva kwesikhashana, Anatoly Ivanovich wathutha emsebenzini okuphenya.
Ngo-1991, Anatoly Yakunin waqokwa iSekela leJaji wamaphoyisa bomdabu Dolzhanskogo. Kusukela ngaleso sikhathi kuqhubeke, waqala ngokushesha ukukhuphuka isitebhisi umsebenzi. Ngakho, ngo-1994 wamiswa njengephayona elivamile iNhloko yoMnyango Wezangaphakathi. Njengenjwayelo, ukuba bafeze imisebenzi yabo Yakunin Anatoliy Ivanovich wasondela ngokucophelela okukhulu, nalabo abangaphansi yafuna okufanayo. Ngakho-ke akumangalisi ukuthi umnyango eliholwa le ndoda kwadingeka abanye amazinga best esifundeni.
Kungokwemvelo ngokuthi noma imuphi umzamo nokuphikelela umvuzo. Mina yayiphumula futhi Anatoly Yakunin. Ministry Interior pha him khundla entsha - oyinhloko yamaphoyisa edolobheni Livny. yemisebenzi yakhe nazo ezifakwe elengamele ndawo.
Ngo-2002 kulandelwa i-aphoyintimenti entsha. Anatoly Yakunin wayithi abakhulu indawo uMnyango umzabalazo wokulwa nobulelesi obuhleliweko we Oryol esifundeni. Kwaba kakade isikhundla akulona isikali endawo nawesifunda, futhi kwelinye amasayithi ezibucayi kakhulu futhi kuyingozi. Akusiyo imfihlo ukuthi nobugebengu obuhleliwe ivame ukuhlotshaniswa nezikhulu ezinezikhundla eziphezulu.
Kodwa ukukhuthazwa okwengeziwe kwakungenakwenzeka ngaphandle kokuthola ezingeni eliphakeme lemfundo. Kwakungekhona kuyimfihlo iminyaka Anatoly Yakunin. Ngakho-ke, ngemuva kwekufundza tikhatsi letinyenti kakade ngesikhathi Amaphoyisa Academy, wahlanganyela Civil Service Academy, okuyinto wathola iziqu nge-honours ngo-2003.
Njengoba ubona, kukhona uhlobo lwabantu abafuna ukuba ngowokuqala kukho konke, kokubili emsebenzini nasekuphileni nomndeni ezifundweni zabo. Umuntu onjalo kwaba Anatoly Yakunin. Umlando wakhe uthi ngemuva kokuphela Academy of ukuphila kwale ndoda yenza ube esejika. Ngo-2005 wamiswa njengephayona elivamile ikhanda oyiphini amaphoyisa we Oryol esifundeni. Ngaleso sikhathi kakade Anatoly Ivanovich kwaba Colonel we MVD.
Ngaphezu kwalokho inkonzo impumelelo
Akukho muntu kwaba Yakunin, ukuba zihlale phezu azithele ngabandayo yethu. Nokho, ngisho noma akazange abheke ukuthi umsebenzi okunye, oluvelele isevisi kanye nobuholi izimfanelo yayo ayikwazanga ukuyisiza kodwa ukuqaphela gaba we Russian Interior Ministry, ngokwezwi nezwi esasizobhujiswa Anatoly Ivanovich isabelo iziqu ezintsha kanye izikhundla.
Kusukela 2006 kuya 2007, Anatoly Yakunin kwadingeka ukuba okwesikhashana ukwenza imisebenzi inhloko egatsheni wesifunda Wezangaphakathi we Oryol esifundeni. Kodwa ngo-2007, ngokugcwele kulesi sikhundla okunikezwe omunye umuntu - Vladimir Kolokoltsev, okuyinto Yakunin yaphinde yaba lokuqala elifike.
Kumele kuqashelwe ukuthi le Ngohlelo uye wasebenza kahle kakhulu, akhombisa kuvisisa ebuhlotsheni ukusebenza, kanye okungenabungozi ekulweni eHayidese. Kwakuphakathi ubuholi Kolokoltsev Yakunin futhi orel legatsha wesifunda Wezangaphakathi wavula eziningi ephezulu Iphrofayela bayakwazi imenze isiphelo sako okunengqondo.
Izilwane zabe zingamesabi ukuba uphenyo ngisho ngokumelene nezikhulu ezinezikhundla eziphezulu, uma esephula umthetho. Ikakhulukazi, Ezimweni eziningi amiswe ngokumelene abantu eduze umbusi wendawo. Futhi, resonance kwaba ukunqotshwa enkulu kulezi zigilamkhuba orel esifundeni - igenge Sparrow sika.
Translations ku kwenye indawo
Kodwa, ngeshwa, kwathatha isikhathi esingaphezudlwana konyaka a ukubambisana okunjalo yimpumelelo Kolokoltseva futhi Yakunin. Ngo-2008, sivule yabo isihlakazeka njengoba Anatoly Ivanovich wayiswa isikhundla okulingana ku Voronezh esifundeni. Kunzima ukusho ukuthi yini ukuthi isuke ibangelwa le nguqulo: personal kanuko Yakunin, namaqhinga izikhulu, okuyinto ewela umgwaqo, noma nje abaphathi Ministry Interior wanquma ukuthi kule Voronezh esifundeni manje badinga isandla liqinile, Anatoly Ivanovich. Bathi ukuthi kwaba isicelo inhloko yawo amaphoyisa Voronezh, owayefuna ukuba endaweni abasizi ezinjalo professional Yakunin.
Ngakho Yakunin baba iSekela leJaji Ministry Interior ku Voronezh esifundeni. Ngaphezu kwalokho, wathenjiswa kwensika oyinhloko yamaphoyisa lobugebengu. Voronezh esifundeni, ngenxa yokuthi isibalo sabantu salo izikhathi ezingaphezu kwezintathu ephakeme kunaleyo Oryol esifundeni, kubhekwe ukuba yinkimbinkimbi kakhudlwana futhi indawo ebalulekile yomsebenzi. Ngakho, ngokwezinga elithile, le nguqulo zingase ngokuthi esikhundleni esithé xaxa.
Ngonyaka ka-2009, ngokwesilinganiso, kwakubikwa ukwanda langempela enkonzweni isikhundla Yakunin. Ngokusho isimemezelo kamongameli, usenguFakazi uMajor General Wezangaphakathi.
Inhloko Ministry lesifunda Wezangaphakathi
Kwakusobala ukuthi uchwepheshe ezifana Anatoly, isikhathi eside sibukela Ngeke sikwazi ukuhlale, bangazihluphi sephini amakhanda lokuqala amaphoyisa lesifunda. Ngo-2010, Yakunin wayithi abakhulu indawo uMnyango Wezangaphakathi Ministry of the Novgorod esifundeni. Kulesi sikhundla, njengasekuqaleni, Anatoly igxile ekulweni nobugebengu obuhleliwe, nakuba Yiqiniso, nezinye izindawo ezibalulekile zomsebenzi wamaphoyisa, Wakhohlwa.
Ngo-2011, Yakunin isidlulile ngempumelelo recertification elihlobene ne kabusha amaphoyisa emaphoyiseni, ngaleyo ndlela eqinisekisa ilungelo layo ukuba inhloko yabangamashumi Wezangaphakathi esifundeni Novgorod. Anatoly olawule siqu kabusha nokuhlola abangaphansi, ngoba ngifuna ube abasebenzi kwabasebenzi abaqeqeshiwe ngempela, okuyinto iphephile ukuba wencika.
Kufanele kuqashelwe ukuthi ngaphambi kokufika umnyango Yakunin Novgorod of Wezangaphakathi elalibhekwa njengelinye lamazwe we emuva kakhulu eRussia, wakwazi uguqule endikimbenni abaphumelela ngempela yokulwa nobugebengu. Lokhu kuqinisekisa imiphumela emihle kakhulu futhi izinkomba - kukhona phakathi eziphakeme kakhulu kuleli zwe. Kodwa impumelelo esemqoka, kwakuwuhlelo ukunciphisa izinga lobugebengu kule ndawo.
Ukuqokwa oyinhloko yamaphoyisa eMoscow
Ibonisa amazinga aphezulu kakhulu ukusebenza kuyo yonke izikhundla ukuthi inabantu Yakunin kulo umsebenzi wakhe, Anatoly Ivanovich ayizange izwi, nangezenzo wabonisa ukuthi uhulumeni waseRussia singakutholi ikhandidethi kangcono isikhundla sokuba oyinhloko yamaphoyisa dolobha, kunaye. Moscow yilona dolobha elikhulu ngobukhulu nesimo sasivumela ezinzima ubugebengu. Ngaphezu kwalokho, kubalulekile ukuba sicabangele ukuthi inhlokodolobha - ubuso lonke lelo zwe. Shona MVD eMoscow professional kumele babe izici okungakaze elihle. Leyo ndoda yayiyisibani Anatoly Yakunin.
Kufanele kuqashelwe ukuthi izici zayo esihle njengoba umholi wakunqoba isici omubi ukuthi wayengakaze wasebenza eMoscow. Ochwepheshe abaningi bakholelwa ukuthi ezimaphakathi nedolobha, amaphoyisa aqapha lizokwabelwa umuntu ongazange asebenze isikhathi unyaka komthetho emizimbeni yenhloko-dolobha. Noma kunjalo, ubuholi wayazi ngokushesha kangakanani Anatoly ingena izindophi endaweni entsha kanye naye njengoba esethembise akazange abe nesikhathi wabonisa ngokucacile.
Ngakho-ke, Yakunin waqokwa Inhloko Ucwaningo Wezindaba eMoscow. Isinqumo phezu Bahlela nayiSigungu owayengumongameli waseRussia ehlobo lika-2012.
Kuyaphawuleka ukuthi ukuba Yakunin, iposi aphethwe uzakwabo zakhe esezinesikhathi eside zimkhonza, ngisho emsebenzini zesikhashana Oryol esifundeni V. A. Kolokoltsev. Manje iye yakhuthazwa ukuba babe uNgqongqoshe Wezangaphakathi, okungukuthi oyinhloko yamaphoyisa kulo lonke leli zwe. Ngakho, Yakunin empeleni kwaphinde kwaba ayewengamele ngqo, kodwa manje abanazo izikhundla lalilikhulu kakhulu kunalokho okwake.
Jobe e Moscow
INhloko Wezangaphakathi eMoscow Anatoly Yakunin uyaqhubeka abonise imiphumela emihle kakhulu imisebenzi yayo, kanye izikhundla aba ngaphambili. Amathemba ukuthi sivule Kolokoltseva futhi Yakunin, ngubani ngakho lolungenamaphutsa sibhekane ngokuphumelelayo imithwalo yabo Oryol esifundeni, futhi ngeke zingafezeki enhloko-dolobha, babe sifaneleka ngokuphelele. Isimo lobugebengu emzini kuyinto ngokuphelele ngaphansi kokulawula kwangaphakathi izindaba emizimbeni abasebenzi.
Yakunin, njengasekuqaleni, kuba efanele kakhulu futhi ngokholo okuhle iphathelene nemisebenzi yabo. Wabuye wathola ukwanda ihhovisi elisha: Manje Yakunin Anatoliy Ivanovich - uLieutenant General.
Ngokwemvelo, abantu, ngokungenabugovu wanikela ukuphila kwakhe inkonzo lawobaba, ayikwazi ezimakwe nge imiklomelo ehlukahlukene isimo. ULieutenant Gen. Anatoly Yakunin kunesithembiso sebuningini izinhlamvu ezicacile isikhundla ezahlukene nesithunzi.
Yeqa yibo esingabalulekile kangako, u kuyafaneleka ibheji udumo umsebenzi MIA, Medal izimpumelelo komthetho, kanye ibheji udumo amasevisi nesifunda Novgorod. Imiklomelo lwakamuva Yakunin waklonyeliswa lapho wayeyinhloko egatsheni Novgorod Ministry Interior.
imiklomelo ezincane kanye nemivuzo Anatoly Ivanovich asitholanga, kodwa, yebo, kubaluleke kakhulu akulona isici esisemthethweni imiklomelo alenzele isihlawulelo, futhi ukubonga okuqotho abantu ngomsebenzi wabo.
Umkhaya Anatoly Yakunin encane - umkakhe nendodakazi uCatherine.
Kuyaziwa ukuthi umuntu omjwayele ufihlile nomkakhe kwaba emuva ezinsukwini lapho Anatoly Yakunin wakhonza orel esifundeni. nengoduso wakhe wayesebenza I iphasiphothi kwelinye lamahhovisi Ministry of Interior.
Nokho, Anatoly Ivanovich, efana nezinye izinceku eziningi esiphakeme civil, singafani okuningi ukusabalala okuningi okuthile okulimazayo ezihlotsheni zawo. Lena ngokuyinhloko ngenxa imininingwane yomsebenzi wakhe, ngoba impela ababeshisekela bayidlanzana izikolo siqu ukuze axazulule nge Anatoliem Yakuninym, futhi cishe, uyofuna usikhiphele umndeni wakhe.
Nakuba ngezinye izikhathi, naphezu kwesimo sakhe Steely, Anatoly Yakunin ayengeke azigcine amazwi ukuziqhenya indodakazi yabo, abahamba ezinyathelweni zikayise. Ekaterina kokuphothula esikoleni sezomthetho futhi baba umsizi ngowokuqala umshushisi omunye ehhovisi lomshushisi of Eagle, futhi ngo-2011 wayiswa ukusebenza enhlokodolobha.
Ngokuqinisekile uyaziqhenya ipumelelo indodakazi yakhe Anatoly Yakunin. Izihlobo futhi ngomsebenzi wakhe izici ezinhle zezwe lokhokho.
Anatoly Yakunin lingachazwa ngokuthi i ukuzinikela angakaze abe khona umsebenzi womuntu. Wayengumuntu efunwa kakhulu yena abangaphansi kwakhe, kuba njalo kungenzeka ukuya ephambili izingxenyana isakhi Ministry Interior, okuyinto wakwazi. Kungabanjani, umuntu self-eyashukumisela kanzima kanti esingenabugovu Anatolii Ivanoviche ukukhuluma eziningi esiphakeme izikhulu zikahulumeni kanye nochwepheshe. izinkumbulo babathanda kakhulu umsebenzi isiyonke Anatoliem Yakuninym wahlala enhloko esifundeni Novgorod. Ngaphandle kwalokho, Anatoly wathola udumo fighter okuqinile ngokumelene ubugebengu obuhleliwe futhi inkohlakalo. amasevisi yakhe Sekuyisikhathi eside kuthathwe njengesibonelo bonke abasebenzi of komthetho emizimbeni yeRussia.
Singasho ngokuqiniseka futhi ukuthi uma abantu balesi Ubumnene kwizindawo ezahlukene zikahulumeni ayemaningi, nokuthuthukiswa isiRashiya kwakuwulimi ngokushesha okuningi kunalokho manje.
Umlingisikazi Beren Saat: Biography futhi Filmography
Vyacheslav Anatolevich Shalevich: Biography nemisebenzi
URobert Wilson - iqondiswe. Biography, empilweni yakho, umsebenzi
Evgeniy Otstavnov: Biography yamahlaya
Umlingisikazi Anastasia Tsvetaeva: indima singakunaki ukuphila komuntu nokuzilibazisa
Indlela bajwayelane intombazane emgwaqeni
Kwakukhona izimpawu abomvu ngemilenze yakhe. Kusho ukuthini lokhu?
Freeboot xbox 360 - kuyini? Incazelo egcwele kanye kwebalingisi
Polonskiy Sergey Yurevich sithungatha futhi simba MiraxGroup
Igor sklyar: Biography, empilweni yakho, umsebenzi
Ihhotela Incazelo Amathathu Amakhona Palmyra Amar el Zaman 4
School jezi lakhe athole amantombazane: knitwear, ukotini. blouses School Elegant
Pancake Fluffy ngaphandle amaqanda ku yogurt: iresiphi. pancake Fluffy ngaphandle amaqanda ku yogurt: iresiphi ngesithombe